I-China 1390 CO2 Laser Engraver yee-Acrylics, Ilaphu, iiJeans, uMvelisi weSikhumba kunye noMthengisi | Ngaphezulu
I-1390 CO2 yeLaser Engraver yee-Acrylics, Ilaphu, iijini, isikhumba
Icandelo #Outstanding ukusika umnqamlezo, ngqo eliphezulu, uzinzo elungileyo, ukwanelisa iimfuno inkqubo inkqubo iindawo ngqo. Umsebenzi weDynamic uzinzile, uyakwazi ukusebenza ixesha elide.
#Ukucoca ukusika zombini okungezizo zesinyithi kunye nesinyithi, ukwazi ukusika intsimbi engenasici, ikhabhoni yentsimbi, i-acrylic kunye neenkuni, njl.
#Laser ukusika intloko ngenkqubo auto kugxilwe. Laser ukusika intloko ngokuzenzekelayo ulungelelanise ubude bayo ecaleni umphezulu sheet sheet, ukuqinisekisa ubude focal igcina efanayo lonke ixesha. Smooth cutting edge, akukho mfuneko ipolishi okanye enye yokuphatha. Amashiti e-Flat kunye ne-wavy anokucheba ngalo matshini.
I-laser engraver efikelelekayo ingasetyenziselwa ukusika, ukuthambisa kunye nokukrola isikhumba, ilaphu, ilaphu, iphepha, ijini, imicu kunye nezinye izinto eziguqukayo. Ngoku i-laser engraver yexabiso eliphantsi iyathengiswa ngexabiso elifikelelekayo.
Iimpawu ze-laser engraver yesikhumba, ilaphu, ijeans, iphepha
1. Uzinzo oluphezulu kunye nolwakhiwo oluphezulu lomatshini olwenziweyo ngemodeli yokuchaneka ephezulu enokuqinisekisa ukushukuma kwedatha okuzinzileyo, isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza kwexesha elide ngaphandle kohlengahlengiso kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo okufanayo. Uluvo loyilo lokujikeleza umzimba ngapha nangapha lunokongeza izinto zangaphambili nangasemva zazo zokwenza umsebenzi ongenasiphelo.
2. Iintloko ezimbini ze-laser engraver zamkela inkqubo yolawulo lwedijithali ye-DSP ehambileyo, unikezelo lwamandla oluqhelekileyo lwe-laser, isitayile esimanyanisiweyo sesitayile, uzinzo oluphezulu, isantya esiphezulu se-USB 2.0 yemveliso yokubonelela inokuxhasa ukusebenza kwe-off-line.
3. Dlulisa iifayile ngqo kwiCoredraw, AutoCAD.
4. Ukulungiswa koyilo loomatshini kunye nombane, ingxolo ephantsi.
5. Amandla amakhulu kunye nozinzo oluphezulu lwe-laser tube, i-lens engenisiweyo kunye nesipili, ixesha elide lobomi.
6. Ukungeniswa komgaqo kaloliwe ongenisiweyo kunye neetape ezikumgangatho ophezulu zokuhambisa, ukuxhobisa ulwakhiwo olukhawulezayo, ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokusika okuzinzileyo.
7. Itafile ezenzekelayo ezantsi, isixhobo esijikelezayo, indawo echaphazelayo ebomvu, i-Z axis yokhetho.
Izicelo zeLaser Engraver yeeJean, Isikhumba, Ilaphu, iPhepha
Izinto ezifanelekileyo: Isikhumba, ilaphu, impahla elukiweyo, ilaphu, iglasi, iglasi ye-organic, i-acrylic, ukhuni, i-MDF, i-PVC, iplywood, i-maple leaf, ibhodi enemibala emibini, i-bamboo, i-plexiglass, iphepha, imabhile, iiseramikhi, njl.
Imizi-mveliso Esebenzayo: Ilitye lesikhumbuzo / ilitye lengcwaba / ishishini leTombstone, ishishini lengubo, ishishini lemodeli, iimodeli zokwakha, ezokubhabha kunye neemodeli zokuhamba kunye nezinto zokudlala ezenziwe ngomthi, intengiso, imihombiso, ubugcisa, ubugcisa, izixhobo zombane kunye nezixhobo zombane, njl.
Iiparamitha zobugcisa zeLaser Engraver yesikhumba, iPhepha, iLaphu, iJeans
Umzekelo ISIHLOMELO 1390
Indawo yokuSebenza 1300mm * 900mm
Amandla eLaser 60W (80W, 100W, 130W, 150W ukhetho)
Uhlobo lweLaser Iglasi CO2 laser ityhubhu
Ihambelana Software IiLaserWorks V8
Inkqubo yokuma Ichaphaza elibomvu
Inkxaso yeFomathi yoMzobo I-AI, i-PLT, i-BMP, i-DXF, njl.
Indlela yokuqhuba Isithuthi se-Stepper
Indlela yokupholisa Ukupholisa ukujikeleza kwamanzi
Ukuncamathisela iZinamathiselo Umoya wokukhupha umoya ngetyhubhu yokungena
Ukusebenza kweVoltage AC 110 - 220V
1390 umatshini laser
China New 300mm bokushicilela 4 Axis Atc ngomthi Carvin ...
FULL Zenzekelayo CNC Milling Machine for Ikubumbe Ukwenza
CNC Gasket Cutting Matshini kunye womoya Oscil ...
4 × 6 Ukuzonwabisa CNC umzila Machine for Sale at A ...
I-2 × 3 i-CNC Router 6090 iyathengiswa ngexabiso lexabiso
3 Axis Wood Lathe Matshini for Custom Wood Ivula